Amxaari - Wikipedia
Amxaari (Af Ingiriis : Amharic; Af Amxaari : አማርኛ; Amarəñña, IPA: [amarɨɲːa]) waa luqad looga hadlo waqooyiga dhexe ee Itoobiya, waana luqada rasmiga ah ee Dawladda Federaalka ee Itoobiya. Luqadaha Semitiga.
Af-Amxaari waa mid ka mid ah luqadaha Itoobiyaanku, kuwaas oo ah Qayb ka mid ah qaybta hoose ee laanta Semitic ee luuqadaha Afroasiya. Waxaa lagu hadlaa afafka ugu horeeya ee Amhariska iyo lingua franca dad kale oo ku nool magaalooyinka iyo magaalooyinka waaweyn ee Itoobiya. Luuqaddu waxay u adeegtaa luqadda rasmiga ah ee shaqada ee Itoobiya, sidoo kale waa luuqada rasmiga ah ama luuqadaha shaqada ee dhowr waddan oo ka tirsan nidaamka federaalka. Iyadoo 21,811,600 wadarta wadaxaajoodka laga soo bilaabo 2007, oo ay ku jiraan ku dhowaad 4,000,000 L2 ku hadla, Amxaariyadu waa luqadda labaad ee ugu badan ee lagu hadlo af-Soomaaliga, ka dib Carabi. Amharic waxaa loo isticmaalaa habka bidix-ku-xigga adoo isticmaalaya nidaam ka soo baxay qoraallada Geese, oo loogu yeero luqadaha Itoobiyaanka ah, Fidäl, "nidaamka qoraalka", "warqad", ama "dabeecad" ama abugida (አቡataanዳ ), laga soo bilaabo afartii calaamadood ee ugu horraysay, taas oo keentay ereyga casriga ah ee abugida.
Ma jiro qaab la isku raacay oo loo yaqaan 'Amharic' oo loo yaqaan 'script'. Tusaalayaasha Amharic ee qaybaha hoose waxay isticmaalaan hal nidaam oo caadi ah, inkasta oo aysan ahayn mid caalami ah, oo ka mid ah luqadaha ku hadla luqadaha Semitic ee Itoobiya.
Qoraalka[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Amxaari&oldid=221640"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 26 Oktoobar 2021, marka ee eheed 19:01.